लगानीको पर्खाइमा प्रदेश ६ को पर्यटन क्षेत्र
माघ १५, २०७४| प्रकाशित ११:४४
सुर्खेत– नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल हो– रारा, जुन प्रदेश नम्बर ६ को मुगु जिल्लामा अवस्थित छ। नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल हो– से फोक्सुण्डो, जुन यही प्रदेशको डोल्पामा छ।
नेपालकै पहिलो संरक्षित वन काँक्रेविहार सुर्खेतमा छ। जमिनमा सधैंभरि ज्वाला बलिरहने अनौठो ठाउँ श्रीस्थान रहेको दैलेख पनि यही प्रदेशमा पर्छ। प्रख्यात मानसरोवर यही प्रदेशको शिरमा अवस्थित छ।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश नं. ६ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सक्ने धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक र पर्यटकीय सम्पदाहरुले भरिपूर्ण छ। यी सम्पदाहरुको संरक्षण गर्दै उपयोग गर्न सक्ने हो भने सबैभन्दा धेरै नागरिक गरिब रहेको प्रदेश नम्बर ६ केही वर्षभित्रै समृद्ध बन्न सक्ने उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नं ६ का अध्यक्ष पदमबहादुर शाही बताउँछन्।
शाहीले यो प्रदेशलाई समृद्ध पार्ने प्रमुख आधार नै पर्यटन भएको बताए।
सम्भावना कति ?
मानसरोवर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरुको आकर्षक गन्तव्य हो। मानसरोवर पुग्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। त्यसैगरी रारा पनि अर्को आकर्षक गन्तव्य हो, जहाँ आन्तरिकका साथै बाह्य पर्यटकहरु पनि आकर्षित हुने गर्छन्।
मुगुमा रहेको रारा ताल नेपालको सबैभन्दा ठूलो ताल पनि हो। दैलेखको श्रीस्थानमा रहेको ज्वाला, सुर्खेतका काँक्रेविहार, देउतीबज्यै, बुलबुले, बराहताल, चमेरे गुफा, सल्यानको कुपिण्डे दह, डोल्पाको से फोक्सुण्डो ताल, त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर पनि पर्यटक तान्न सक्ने स्थल हुन्। त्यसैगरी यो प्रदेशमा ट्रेकिङको पनि पर्याप्त सम्भावना छ। भित्री मधेससहित पहाडी र हिमाली क्षेत्र रहेको कारण पनि यो भूगोलमा ट्रेकिङको लागि अझ आकर्षण बढ्न सक्छ।
यस्तै, जल पर्यटनको सम्भावना पनि प्रशस्त छ। भेरी र कर्णाली जस्ता ठूला नदी पनि यहाँ रहेका छन्। यी नदीहरुमा व्यावसायिक रुपमा र्‍याफ्टिङ सञ्चालन गर्न सकिन्छ। हाल पनि विभिन्न स्थानमा र्‍याफ्टिङ सञ्चालन भइरहेको छ।
पर्यटन विकासको अर्को सम्भावना भनेको प्याराग्लाडिङ पनि हो। विगतमा सुर्खेतमा यसको परीक्षण पनि गरिएको थियो। तर, अहिले बन्द भएको छ।
प्याराग्लाइडिङको परीक्षण गराएका महासंघका अध्यक्ष शाही सुर्खेतसहित विभिन्न जिल्लामा व्यावसायिक रुपमा प्याराग्लाडिङ सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना पनि प्रशस्त रहेको बताउँछन्। बञ्जी जम्पका लागि पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेर त्यसलाई अघि बढाउन सकिने सम्भावना यहाँ रहेको उनको भनाइ छ।
‘यी विविध सम्भावनालाई योजनाबद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने यहाँको आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुनेछ। यसले नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनुका साथै प्रदेशको समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ’ शाहीले भने।
के छन् समस्या ?
प्रदेश नम्बर ६ मा पर्यटयकीय स्थलहरुको कमी छैन। कमी छ त केवल त्यसको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने योजनाको। पर्याप्त सम्भावना भएर पनि पर्यटन क्षेत्रको विकास नहुँदा समग्र प्रदेशको विकास खुम्चिएको छ। भएका पर्यटकीय स्थलहरुको संरक्षण, प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसार गर्न नसक्दा प्रदेश ६ ले पर्यटनको माध्यमबाट लिनसक्ने लाभ लिन नसकेको बताउँछन्, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रकाश अधिकारी। पछिल्लो चरणमा रारामा आन्तरिक पर्यटनले केही विकास भएको भए पनि यसको व्यवस्थित विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
पर्यटकीय स्थलसम्म पुग्ने यातायातको सहज सुविधा नहुनु अर्को मुख्य समस्या हो।
‘यदि कर्णाली करिडोर बन्न सकेमा रारा र से–फोक्सुण्डो मात्र होइन, धार्मिक पर्यटनका लागि कर्णालीको शिरमा रहेको मानसरोवर पनि कर्णाली पर्यटनको आधार बन्नसक्छ’, अधिकारीले भने, ‘कर्णालीको करिडोर मार्गको निर्माण भए हजारौं भारतीय पर्यटक नेपालगन्ज हुुँदै हुम्लाको बाटो प्रयोग गर्ने हुँदा यहाँको आर्थिक समृद्धिमा समेत यसले सघाउ पुग्नेछ।’
कर्णाली करिडोरको निर्माण, यस क्षेत्रका विमानस्थलहरुको स्तरोन्नति गर्न सकेमा पर्यटन विकासले फड्को मार्ने हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सांसद जीवनबहादुर शाही बताउँछन्। ‘यो प्रदेशको आर्थिक आधारका रुपमा रहेको कर्णाली करिडोर बनेको छैन’, उनले भने, ‘मानसरोवरबाट कर्णालीवासीले अपेक्षाकृत लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। भविष्यमा यो प्रदेशले यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ।’
पर्यटकहरुका लागि उचित बाससहितका होटलको अभाव पनि यहाँको अर्को समस्या हो। रारा, से–फोक्सुण्डो र मानसरोवर लक्षित सुविधासम्पन्न होटेलको कमी छ। रारालाई लक्षित गरेर स–साना होटेल खुलेका छन्। तर, त्यहाँ व्यवस्थापनको पाटो निकै कमजोर छ। रारामा आन्तरिक पर्यटक आउने क्रम निकै बढेको छ।
पर्यटकहरुलाई आकर्षण गर्न सक्ने स्थल भएको सुर्खेत र दैलेखमा पनि सुविधासम्पन्न होटेलको अभाव छ। पछिल्लो समयमा सुर्खेतमा भने होटल व्यवसायमा लगानी बढ्दै गएको छ। होटल व्यवसायी संघ सुर्खेतका अध्यक्ष तर्कबहादुर शाही सुर्खेतमा ठूला विमान अवतरण गर्ने विमानस्थल नहुँदा पनि यहाँका होटल व्यवसाय फस्टाउन नसकेको बताउँछन्। उनले पर्यटन विकासका लागि होटल व्यवसायको पनि विकास हुनुपर्ने बताए।